Jun 18, 2019 1 min read Drama
ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်တော် ဝေဖန်မှာမဟုတ်ပဲ Director Luis Buñuel နဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ Jean-Claude Carrière တို့ပုံဖော်ခဲ့ကြသလိုပဲ ကိုယ်လှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုကနေ ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
ဇာတ်ကောင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကိုပြောတာနဲ့သွားတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တင်ပြထားတဲ့ ယခုဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုပဲ အပြည့်အခြေခံထားပြီး ဇာတ်ကောင်ရဲ့လုပ်ရပ်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတွေးစတွေကို ပုံဖော်ထားလို့ပဲ။
Séverine Serizy ဆိုတဲ့ အသက်ခပ်ငယ်ငယ် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်၊ စစ်ကြီးပြီးတဲ့ကာလ နောက်ပိုင်းက ပါရီမြို့ပေါ်က လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမ လက်ထပ်ယူထားတဲ့ အမျိုးသားကလည်း အောင်မြင်ကာစ ခွဲစိပ်ဆရာဝန် လူငယ်တစ်ယောက်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ထိုခေတ်ကာလ အနေနဲ့စိတ်ညစ်ညူးစရာ တစ်ခုတလေမှ မရှိလောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ဘဝတွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူသားတွေဟာ လူသားပီပီ စိတ်ညစ်စရာ မရှိတာကို စိတ်ညစ်တတ်ကြတယ်။ ပြဿနာမဟုတ်တာကို ပြဿနာလို့ခံယူတတ်ကြတယ်။ လူသားတွေရဲ့စိတ်ဟာ ထူးဆန်းတယ်။ တစ်ခုခုကို အလိုမကျဖြစ်နေမှ နေ့စဉ်ရှင်သန်နေရတဲ့ နေ့ရက်တွေဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံယူတတ်ကြပုံပဲ။
Séverine တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပေမဲ့ အကြီးမားဆုံးပြဿနာကတော့ Séverine အနေနဲ့သူမ လင်ယောကျ်ားအပေါ်မှာ ကာမဆက်ဆံလိုစိတ် မရှိနေခြင်းပဲ။ သူမ အမျိုးသားနဲ့အသားချင်းအနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းကိုတောင် သူမအတွက် ခံစားလို့မရဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမက ခပ်ပွန်းကို မချစ်လို့လားဆိုတော့ မချစ်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ချစ်တယ်။ သူမကိုယ်သာ သူမ နားမလည်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အကြင်လင်မယားဖြစ်ပေမဲ့ ခုတင်ခွဲအိပ်ကြတယ်။ အမျိုးသားဖြစ်သူ Pierre က အစကတော့ ယောကျ်ားတို့ထုံးစံအတိုင်း သိပ်ဘဝင်မကျပေမဲ့ သူ့ဇနီးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ခံယူချက်ကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့အိပ်ယာသီးသန့် အိပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်။
Séverine ဟာ အမှန်တော့ လိင်စိတ်ကင်းမဲ့နေတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့သာ ဆက်ဆံဖို့စိတ်မပါပေမဲ့ သူမစိတ်ကူးတွေ၊ အတွေးတွေမှာတော့ သူမကို ရက်စက်တဲ့နည်းတွေနဲ့သူမခင်ပွန်းဖြစ်သူရော၊ တစ်ခြားသူစိမ်းယောကျ်ားသားတွေကပါ လိင်ဆက်ဆံကြတာကို အမြဲစိတ်ကူးယဉ်လေ့ရှိတယ်။ (ဇာတ်ကားကို ဘာနဲ့စဖွင့်သလဲဆိုတော့ တောအုပ်တစ်နေရာမှာ သူမနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့မြင်းလှည်းစီးပြီး တစ်နေရာမှာ ခင်ပွန်းက မြင်းလှည်းကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူမကို လှည်းပေါ်က အတင်းဆွဲချပြီး အဝတ်တွေကို ဖြဲကာ သစ်ပင်တစ်ခုမှာ ကြိုးတုပ်ထားလိုက်တယ်။ သူမက ငိုယိုပြီး တောင်းပန်နေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ခင်ပွန်းက သူမကို ကျာပွတ်နဲ့ရိုက်ဖို့ မြင်းလှည်းမောင်းသမားတွေကို အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ ထို့နောက် ထိုမြင်းလှည်းသမားတွေက သူမကို မုဒိန်းကျင့်ကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူမ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ စကားက “Pierre, please, don't let the cats out!" ဒါဟာ သူမရဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ သူမတစ်ယောက်တည်း သိတဲ့ စိတ်ကူးတွေ။)
Séverine မုန်းတီးတယ်လို့ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်တော့ ရှိတယ်။ သူ့နာမည်က Henri Husson။ Henri က Pierre ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အကြည့်တွေက မရိုးသားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့သူ။ ရမယ်ဆိုရင် Séverine နဲ့ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ သူမျိုး။ ဒါကိုလည်း Séverine က သိလို့ထိုသူကို မလိုလားခဲ့တာ။ ဒီလိုနဲ့သူမ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီကနေ ပါရီမြို့ပေါ်မှာ ဆောင်ကြာမြိုင်အိမ်တွေ ရှိနေခဲ့တာကို သူမ သိလာတယ်။ တစ်ရက် စကားပြောကြရင်းနဲ့ပဲ Henri ကနေ ဆောင်ကြာမြိုင်လိပ်စာ တစ်ခုကို သူမရလာခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တော့မဲ့ နေရာတစ်ခုဆိုတာ သူမသိလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူမဟာ ထိုအိမ်ကို ရောက်သွားပြီး နေ့ခင်းပိုင်းတွေမှာ ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ် သွားလုပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။
အစကတော့ သူမဟာ ထိတ်လန့်နေတယ်။ သူမ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားပြီလားလို့တောင် သံသယ ဝင်လာမိတဲ့အထိ။ ဒါပေမဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒဟာ ထိန်းချုပ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ သူမဟာ သူမရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆန္ဒကို အရှုံးပေးခဲ့မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့နေ့လည်ဘက်တွေမှာ ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက် အဖြစ်လုပ်ကိုင်ပြီး ညနေ5နာရီဆိုတာနဲ့ခင်ပွန်းဆီကို အိမ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ပြည့်တန်ဆာနာမည်ကတော့ Belle De Jour တဲ့။
ဒီနေရာက စပြီး Séverine ဇာတ်ကောင်နေရာကို ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်ကြရအောင်။ သူမဟာ ငွေကြေးလိုအပ်နေလို့လား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုသူမဟာ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဝါသနာအရ လုပ်တာလား။ ဒီလိုလည်း ကျွန်တော် မမြင်မိဘူး။ သူမရဲ့လိင်စိတ်အာသီသ က လူအများစုနဲ့မတူပဲ ထူးဆန်းနေရုံသပ်သပ်ပါ။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ လိင်အရသာကို သူမခံစားချင်တယ်။ ပြင်းပြတဲ့ ရမက်နဲ့သူမကို လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ဆက်ဆံတာမျိုးကို သူမတောင့်တတယ်။ ထိုစိတ်တွေကို တောင့်တနေတာက သူမကိုယ်တိုင် လက်မခံချင်တဲ့ မသိစိတ်မျိုး။ ဒါပေမဲ့ လူသားပီပီ လိင်စိတ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုကို အရှုံးပေးခဲ့လိုက်တော့တယ်။ သူမ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ အလုပ်ကိုပဲ အချိန်ပြည့်နီးပါး အာရုံစိုက်နေတဲ့ သူမျိုး။ ဒါပေမဲ့ သူမ ဆန္ဒတွေကိုတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဝန်မလေးတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။ သို့သော် သူမရဲ့စိတ်ရိုင်းထဲမှာ ယခုလို အတွေးမျိုးတွေ အာသီသဆန္ဒတွေ ကိန်းအောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိခဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။
Séverine ရဲ့စိတ်ကူးရိုင်းတွေထဲက ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်ကြရအောင်။
ကျွန်တော်စောစောက ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်း သူမဟာ Henri ဆိုတဲ့ လူကို ကြည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ မြင်ပြင်းကပ်နေပုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးအများစုမှာတော့ ထိုသူ ပါဝင်နေတယ်။ စိတ်ကူးတစ်ခုမှာ သူမဟာ အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး တောစပ်က တိုင်တစ်တိုင်မှာ ကြိုးချည်ခံထားရတယ်။ သူမကိုယ်ပေါ်က အဝတ်စလေးတွေဟာ လေနဲ့ အတူလွင့်ပျံနေကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Pierre နဲ့ Henri တို့နှစ်ယောက်ဟာ မြေကြီက မြေသားရွှံတွေကို ကော်ယူပြီး သူမကို ကောက်ပစ်ကြတယ်။ သူမရဲ့မျက်နှာတွေရော၊ ကိုယ်လုံးတွေမှာပါ ရွှံတွေပေကျံလို့။ ယောကျ်ားနှစ်ယောက်ဟာ နားမခံသာတဲ့ စကားတွေနဲ့သူမကို မိန်းမပျက်လို့သမုတ်ခေါ်ဆိုနေကြတယ်။ နောက်ထပ် စိတ်ကူးတစ်ခုကတော့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ သူတို့ထိုင်နေကြတယ်။ ထို့နောက် Henri က ဝိုင်ပုလင်းတစ်ခုကို ခွဲလိုက်ကာ ထိုပုလင်းကို ယူပြီး Pierre ရှေ့မှာပဲ Séverine နဲ့စားပွဲအောက်မှာ လိင်ဆက်ဆံကြတယ်။ ဒီအချက်က ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူမရဲ့အတွင်းစိတ်ကို ကောင်းစွာ မသိနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူမရဲ့Fantasies တွေမှာ သူမမုန်းတီးတဲ့ကို ယခုလို သူမစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင်ရော သူမစိတ်ကို နားလည်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝနဲ့နီးစပ်တာကို ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူသားတွေရဲ့မသိစိတ်က သိစိတ်ရဲ့လိမ်ညာခြင်းကို ဖွင့်ဟပြတတ်တယ်လေ။ ဒါကိုပဲ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက ကိုယ်စားပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရနိုင်တယ်။
Séverine ဟာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လုပ်ကိုင်လာရတဲ့ ဘဝကို နှစ်ခြိုက်လာတယ်။ သူမကိုယ် သူမလည်း ပိုမိုယုံကြည်လာတယ်။ သူမဟာ တစ်ခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ကွာခြားတာက တစ်ခြားသူတွေ လက်မခံရဲတဲ့ အရာတွေကိုပါ လက်ခံရဲတယ်။ တစ်ရက်မှာ အရှေ့တိုင်းသား လူကြီးတစ်ယောက်ဟာ သီချင်းတွေဆိုပြီး သူတို့ဆောင်ကြာမြိုင်ကို ရောက်ချလာတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ သေတ္တာဘူးတစ်ဘူးကို ကိုင်ထားတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ထိုသေတ္တာလေးကို ဖွင့်ပြတယ်။ ထိုမိန်းမက အကြောက်အကန်ငြင်းတယ်။ သူနဲ့တော့ မရဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ထိုအရှေ့တိုင်းသားက Séverine ကို ရွေးပြီး အခန်းထဲရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ထိုသေတ္တာဘူးလေးကို ဖွင့်ပြပြန်တယ်။ သူမ ဘာမှ မပြောဘူး။ လက်ခံလိုက်တယ်။ ထိုလူကြီရဲ့ လက်ထဲကကိုင်ထားတဲ့ အလုံးတွေဟာ အသံမြည်နေတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်၇တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်သလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ နောက်ဆုံး ထိုအရှေ့တိုင်းသား ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ပြီး ထွက်သွားတယ်။ အိပ်ယာပေါ်မှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ Séverine ကို ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။ အခန်းရှင်းတဲ့ မိန်းမကြီး ရောက်လာတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ သွေးစွန်းနေတဲ့ အဝတ်စတစ်ခုကို တွေ့တော့ မျက်နှာမကောင်းပဲ သူလည်း အဲ့လူကြီးလာရင် အရမ်းကြောက်တာပဲလို့ပြောတော့ Séverine မျက်နှာက ပြုံးပြီး ထိုအရသာကို ကျေနပ်အားရတဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ဖြေခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ သူမရဲ့လိင်စိတ်ဟာ တစ်ခြားသာမာန်သူတွေ ကြောက်ရွံတဲ့အရာမျိုးကိုမှ အာသီသပြေစေတာကို ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုသေတ္တာလေးထဲက ပစ္စည်းလေးဟာ ဘာလေးလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ အခုထိ မသိခဲ့ကြပေမဲ့ Séverine တစ်ယောက်တော့ ကျေနပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ရိုက်ကူးခဲ့သူ Director Luis Buñuel နဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ Jean-Claude Carrière တို့ဟာ ထို Séverine ဇာတ်ကောင်ကို သူရူးတစ်ယောက်အဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဇာတ်ကောင်ရဲ့သာမာန်မဟုတ်သော ဆန္ဒတွေရဲ့ပေါက်ဖွားရာ အရင်းအမြစ်ကို နားလည်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတာပဲ တင်ပြခဲ့တာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ယခုဇာတ်ကားဟာ Director Luis Buñuel ရဲ့မသေဆုံးခင် နောက်ဆုံးနှစ်တွေထဲက အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်လို့လဲ ပြောလို့ရသလို Séverine အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Catherine Deneuve ရဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အအောင်မြင်ဆုံး ရုပ်ရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်။ (သူမကို ထိုခေတ်က ပရိသတ်တွေ စတင်သတိထားမိခဲ့ကြတာက Director Roman Polanski ရိုက်ခဲ့တဲ့ Repulsion ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ပါ။) ရုပ်ရှင် မရိုက်ကူးခင်မှာ Director Luis Buñuel က မင်းသမီး Catherine Deneuve ကို သတိပေးခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ‘Don’t do anything. And above all, don’t . . . perform.’ တဲ့။
ကျွန်တော် တစ်ခုပြောပြမယ်။ ယခု Belle De Jour ဇာတ်ကားမှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ Sex scenes တွေ တစ်ခန်းမှ မပါဘူး။ နောက်ဆုံးပြောမယ်။ Sex scene လို့မည်မည်ရရပြောရလောက်မဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေတောင် မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလွန်ကို Sexy ဆန်တဲ့ တင်ပြချက်တွေလို့တော့ ကောက်ချက်ချခဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် ယခုဇာတ်ကားကြည့်ဖူးတဲ့ သူတိုင်း ငြင်းကြလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
ယခု ဇာတ်ကားဟာ မရှင်းပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေ များပြားလွန်းတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတွေ မပေးသွားခဲ့ဘူး။ Séverine ရဲ့Fantasies တွေထဲမှာ အမြဲ ပါဝင်လေ့ရှိတာက ကြောင်အော်သံတွေရယ်၊ ကြောင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စကားတွေရယ်ပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကျွန်တော် အတိအကျမသိပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း စဉ်းစားမိတဲ့ အတွေးက ထိုကြောင် ဆိုသောအရာသည် မိန်းမဆန်သော အရာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ခံစားရတယ်။ Feminine နဲ့ပတ်သက်ရင် အနုပညာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြောင်တွေနဲ့တင်စားတတ်ကြတယ်။ ကြောင်မလေးနဲ့တူတယ်တို့။ Hello Kitty တို့၊ Catwoman တို့ကို ကြည့်လိုက်ရင် ကြောင်တွေဟာ မိန်းမတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နေရာအများစုမှာ သုံးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် ဖတ်ရသလောက်ဆိုရင် လူနည်းစုဟာ Original version ကို ကြည့်ဖူးခဲ့ကြပုံပဲ။ သူတို့အပြောအရ ဇာတ်ကားရဲ Climax မှာ Séverine ရဲ့အဝတ်ဗလာနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ကြောင်တွေအများကြီး တက်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း ပါခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အပါအဝင် လူများစုကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ကြောင်ဆိုတာကို အော်သံလေးပဲ ကြားခဲ့ရတယ်။
ဇာတ်လမ်းဟာ အချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ Séverine ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့လက်တွေ့ဘဝဟာ ရောယှက်လာတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ အခုထိ ထိုအခန်းဟာ သူမရဲ့စိတ်ကူးယဉ် Fantasy လား၊ တစ်ကယ့် အပြင်က ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လားဆိုတာ ဝေခွဲမရ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Séverine ဟာ လမ်းမဘေးက ကော်ဖီဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတယ်။ မြင်းလှည်းတစ်စီးဟာ အနားရောက်လာပြီး မြင်းလှည်းပေါ်က လူတစ်ယောက် ဆင်းလာကာ Séverine နဲ့စကားပြောကြတယ်။ ကြည့်ရတာ Séverine ကလည်း သူ့ကို စောင့်နေတဲ့ ပုံမျိုးပါပဲ။ ဒါနဲ့ထိုမြင်းလှည်းပေါ်က လူက Séverine ကို သူ့အိမ်ကြီးကို ခေါ်သွားတယ်။ ဇာတ်လမ်း အစတုန်းက သူမရဲ့စိတ်ကူးထဲက အတိုင်းပါပဲ။ သစ်ပင်တောအုပ်တွေကြားထဲက မြင်းလှည်းလေးပေါ်မှာ သူတို့စီးလာကြတယ်။ တောအုပ်ရဲ့အစပ်နားမှာ ခမ်းနားတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ကို သူတို့ဝင်သွားတယ်။ ထို့နောက် သူမကို အဝတ်ချွတ်စေပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို ဇာအဝတ်စလေး ဝတ်ဆင်စေတယ်။ ပြီးတော့ အခေါင်းတစ်ခုထဲမှာ သေတဲ့ဟန် အဖြစ် နေစေပြီး ထိုသူက သူ့သမီးလေးသေတဲ့ ဟန်မျိုးလုပ်ပြီး ငိုယိုတယ်။ နောက်တော့ သူမ ရဲ့အခေါင်းအောက်ကို ဝင်ပြီး လက်နဲ့အာသာဖြေပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ အိမ်စောင့် အဖိုးကြီးက ဝင်လာပြီးပြောတဲ့ စကားက “Shall I bring in the cats?” တဲ့။
ဒီတော့ ကျွန်တော် စမ်းစစ်မိတဲ့ မေးခွန်းက ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ တစ်ကယ်လား၊ သူမစိတ်ကူးတွေထဲက ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလား ဆိုတာပဲ။ သူမရဲ့လိင်စိတ်ကူးဇာတ်လမ်းတွေမှာ မြင်းလှည်းတွေ ပါတယ်။ တောအုပ်ကြီးတွေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြောင်တွေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းကို သူမရဲ့လိင်စိတ်ကူးဇာတ်လမ်းလို့ယေဘုယျ ကောက်ချက်ချတယ်။ ဒါပေမဲ့ Director Luis Buñuel က ထိုအခန်းဟာ သူမ စိတ်ကူးမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့နေ့စဉ် ပြည့်တန်ဆာ ဘဝထဲက နေ့တစ်နေ့ကို တင်ပြထားတာပါတဲ့။ ကိစ္စပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာ သူမက အိမ်အပေါက်ဝနားမှာ ရပ်နေတယ်။ အိမ်စောင့် အဖိုးကြီးက လာပြီး သူမကို ပြန်တော့လေလို့ပြောတယ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေလို့ လို့သူမဖြေလိုက်တဲ့အခါ ထိုအိမ်စောင့်ကြီးက သူမကို အပြင်ကို တွန်းထုတ်ပြီး အိမ်ပေါ်က မောင်းချကာ တံခါးပိတ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ယခုဇာတ်ကားဟာ Erotic movies တွေမှာ ယနေ့တိုင် အထင်ကရဖြစ်နေဆဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ sec scenes တွေတောင် မပါဝင်ခဲ့တဲ့ ယခုဇာတ်ကားက ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံး Erotic movie လို့လူတစ်ချိုု့က သတ်မှတ်ကြတာလဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် လိင်ကိစ္စကို အတွင်းမှ အပြင်အထိ ကောင်းမွန်နားလည်စွာ တင်ပြနိုင်ခဲ့လို့ပဲ။ သူတို့တင်ပြခဲ့တဲ့ sex ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ထိတွေ့တဲ့ အရသာတွေ ကို မတင်ပြခဲ့ပဲ ထိုအရာဟာ လူသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ကိန်းအောင်းတည်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ပြသနိုင်ခဲ့လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Director ကြီး Luis Buñuel ရဲ့“Mexican exile.” အပြီး ပြင်သစ်ကို ပြန်ရောက်လာပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သူ့နှောင်းပိုင်းရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး တစ်ကားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို 1928 ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “Belle De Jour” ဆိုတဲ့ ဝတ္တုကိုပဲ ပြန်ရိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ မူရင်းစာရေးဆရာကတော့ Joseph Kessel ပါ။ ထို့အပြင် ယခုဇာတ်ကားဟာ Director ကြီး Luis Buñuel ရိုက်ကူးခဲ့သမျှဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးလို့လည်း သိရတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Color နဲ့ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်သလို ဝင်ငွေအများဆုံး ပြန်လည် ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်ကားရဲ့turning point ကို ဆက်ပြောကြရအောင်။ Séverine တို့ဆီကို တစ်နေ့တော့ Gangsters ၂ ယောက် ရောက်ရှိလာတယ်။ အငယ်ဖြစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်က Séverine နဲ့နေဖို့ရွေးလိုက်တယ်။ သူ့နာမည်က Marcel။ သူက လူငယ်ဖြစ်သလို လူမိုက်၊ လူရမ်းကားပုံစံလည်း ပေါက်တယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ တုတ်ကောက်တစ်ချောင်းကို အမြဲသွားလေရာမှာ ကိုင်ထားတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Séverine ရဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ သူမျိုး။ ဒါကြောင့်လည်း Séverine က သူ့ကို ငွေကြေးမယူပဲ နေပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒီမှာတင် Séverine ဟာ Marcel ကို ဘယ်လောက်ထိ သဘောကျသွားပြီလဲဆိုတာ သိနိုင်နေပြီ။ ငွေကြေးက သူမ လိုအပ်ချက်မဟုတ်။ သူမရဲ့ပြင်းပြတဲ့ ှဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့သာ သူမရဲ့လိုအပ်ချက်။ ဒီလိုနဲ့ Séverine ဟာလည်း Marcel ရဲ့Affection ဖြစ်လာတယ်။ သူမဆီကို အချိန်မှန် မသွားရရင် မနေနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ နေ့တိုင်းလည်း ဆောင်ကြာမြိုင်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးနေတယ်။ သူမ ဒီနေ့လာလားလို့ပေါ့။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဇာတ်လမ်း အချိုးအကွေ့တစ်ခုမှာ Sex ကနေ Love ကို မသိမသာလေး ပြောင်းလဲလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ Marcel နားမလည်တဲ့ အချက်တစ်ခုက Séverine ဟာ ချစ်ရတဲ့တစ်ခြား တစ်ယောက် ရှိရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို အလုပ် လာလုပ်ကိုင်နေရသလဲဆိုတာပဲ။ ဒီအချက်မှာတင် Marcel ဟာ လူရမ်းကားတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ လူသားတွေရဲ့လိင်အတွင်းစိတ်နဲ့လူသားအကြောင်းတွေကို ဃဃနန မသိတဲ့ လူသားလေး တစ်ယောက်ဆိုတာ သိလာရတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ Séverine တစ်ယောက် ထိုအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အကြောင်းအရင်းက နှစ်ရပ် ရှိတယ်။ ပထမအချက်က သူမ ထိုအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေတာကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့အသိ Henri ကလည်း သိသွားပြီ ဖြစ်သလို Marcel ရဲ့ စိတ္တဇဆန်တဲ့ သူမအပေါ် စွဲလန်းမှုတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ သူမဘဝအတွက် အန္တာရယ် ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလာလို့ပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ သူမ ထို ဆောင်ကြာမြိုင်မှာ လုပ်တဲ့ အလုပ်ကနေ ထွက်ခွာလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ .. လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေ ရှိနေခဲ့တာကိုတော့ သူမ နားလည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအကျိုးဆက်တွေဟာ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို ကွေ့ဝိုက်စွာ သွားသက်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ … (ကျွန်တော် ဇာတ်သိမ်းကိုတော့ ဆက်မပြောခွင့်ပေးပါ။)
ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်နေရာမှာ သူမဟာ “I can’t help myself” ဆိုပြီး သူမ ငြီးတွား ငိုယိုဖူးတယ်။ သူမဟာ သူမဘဝမှာ ခံစားချက်နဲ့ရမက်ကို ရောနှောစွာ ပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ အမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ လွန်စွာ သနားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကို မကောင်းဘူးလို့လူတစ်ချို့က စွပ်စွဲချင် စွပ်စွဲကြမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ ပြောမယ်။ သာမာန်မဟုတ်တဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊ အတွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့သူမရဲ့ရမက်ကို ကျရှုံးခဲ့တာလို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ဇာတ်ကောင်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကို ပြသသွားတယ်။ သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့အချစ်နဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့ဆန္ဒ၊ သူမမြတ်နိုးသော ခင်ပွန်းနှင့် သူမချစ်သော Marcel၊ ပါရီအထက်တန်းစားဘဝနှင့် ပါရီမြို့ပေါ်က ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ဘဝ၊ ပြီးတောာ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ပြင်ပဘဝတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ရောယှက် တင်ပြခဲ့တယ်။
Surrealism ဆိုတာ 20th ရာစုရဲ့အနုပညာနဲ့စာပေလောကမှာ avant-garde ဖြစ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ။ Surrealism က မသိစိတ်ရဲ့ဖြစ်နိင်ခြေတွေကို Creative ဆန်တဲ့ တင်ပြမှုတွေနဲ့တင်ပြလေ့ရှိတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်စိတ်တွေကို အဓိက တင်ပြလေ့ရှိပြီး လူသားတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေက လွတ်မြောက်ရာ အိပ်မက်တွေလို့ဆိုလို့ရတယ်။ Belle De Jour ရုပ်ရှင်ဟာ တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ ဘယ်အရာက စိတ်ကူး၊ ဘယ်အရာက အစစ်လို့ဝေခွဲရခက်ခဲပေမဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှုပ်ထွေးမနေတဲ့ တင်ပြမှုမျိုးနဲ့တင်ပြထားတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရတယ်။ ပြေရမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်အနေနဲ့နားလည်ရလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့် “Surrealist” ရုပ်ရှင်တွေကို မကြိုက်တဲ့ လူတွေတောင်မှ သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး “Surrealist” ရုပ်ရှင်လို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားအဆုံးမှာတော့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးဟာ နားလည်ရခက်ခဲသွားစေပါတော့တယ်။ Séverine ဇာတ်ကောင်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ သူမဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ စရိုက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာလည်း သူမဟာ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့၇တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ မသိစိတ်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့သိစိတ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ခွဲခြားနိုင်တဲ့ နည်းလေးတွေတော့ ရှာတွေ့ကောင်း ရှာတွေ့သွားပြီထင်ပါတယ်လေ။
IMDb’s rating: 7.8/ 10